Kungani wonke umuntu kufanele athathe i-flashlight? - Liveolight.com
Kungani wonke umuntu kufanele athathe i-flashlight?
I-COB LED 180lm I-Textures Engaxhunyiwe Engenantambo I-LED Lantern ne-Controller Remote
♥ Ama-textures ahlukene, ama-Wireless Music Ukudlala, isitayela se-retro ♥ I-COB LED, i-Maximum Output i-180 Lumens ♥ Amahora angu-2.5-3 amahora angu-Runtime, Amahora we-8-10 Umculo Ukudlala ♥ I-2x18650 (3.7V ...
I-Battery XLUMX Soft Handle Engenakulinganiswa Yomshini We-Power Proof Power Bank I-Bluetooth 18650 I-Wireless Speaker
Kufingqiwe 18650 Ibhethri elishajekayo isibambo esithambile ezithambile ugongolo imvula ubufakazi amandla yasebhange bluetooth 4.0 engenantambo isikhulumi amatende ukukhanya ♥ Aluminium bluetooth isikhulumi inikeza kuze kube 6 + amahora umsindo olungenantambo ...
I-130 i-Lumens 2AAA ye-Incredible I-Flashlight ne-Penclip
Isebenzisa i-CREE XP-E2 R2 LED, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-130 izibani. Ixhaswe yi-2xAAA amabhethri alkaline, ne-3 amahora wokugijima. Itholakala ngemibala ehlukahlukene ye-6 futhi unga ...
Ngisho noma ungathathi i-flashlight njengethuluzi lokuzivikela, kubalulekile ukuthi uthwale i-flashlight nsuku zonke. I-flashlight ehlakaniphile ehlakaniphile ifaneleka ukufaka ezandleni zakho-izikhwama, eziyimisebenzi eminingi njengomese.
Kube khona izinqwaba zesikhathi engangibhekana nazo izinkinga ebumnyameni ezingahle zikhishwe kuphela uma ngabe ngine-flashlight encane ngaleso sikhathi. Isibonelo, uma ngixhuma ikhebula le-TV, elinye lamacici ami lahlehla ngemuva kwebhedi le-TV. Kancane kakhulu kangangokuba angikwazi ukukuthola. Ngakho kwakudingeka ngiguqule indlu yonke i-flashlight. Kodwa uma ngabe ngijwayele ukubeka i-flashlight esebenzayo kanye nommese ephaketheni lami, okungenani i-15 min ingasindiswa ngaleso sikhathi.
Kungenzeka nganoma isiphi isikhathi noma kuphi emhlabeni wonke, ngisho nasogwini olusempumalanga ye-USA, ugesi ungasuswa ngokuzumayo futhi ngeke ubuye uhlale isikhathi eside. Kodwa uma kukhona i-flashlight esandleni sakho lapho uhamba endlini emnyama, isimo sasizohluka. Yaba yinto ebonakalayo futhi elula, futhi ulondoloze isikhathi sakho.
Ngaphandle kokunikeza ukukhanya uma ulungisa ucingo noma ugesi, ukukhanya kwe-flashlight kuyithuluzi lokuzivikela eliwusizo elingasetshenziswa nsuku zonke. Lokhu kuzohlaziywa esihlokweni esilandelayo.